Tag: kubata | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 21, 2017 Andrew Taylor
Yako webhusaiti yekambani ndeimwe yemabhizimusi ako akakosha. Nguva yekutakura, kuwanikwa, uye mashandiro zvinogona kukanganisa yako yepazasi mutsetse. Kana yako saiti yatove kushanda paWordPress - makorokoto! -Iwe uri munzira yako yekuendesa isina musono chiitiko kune vashandisi vako uye nechikwata chako. Ndichiri kusarudza iyo chaiyo CMS idanho rekutanga rakakosha mukuvaka inoshamisa dhijitari chiitiko. Kusarudza neyakakodzera inomiririra iyo CMS inogona kusimudzira mashandiro, kugadzirisa nguva, kudzikisa